From junior ranks to golf stardom – Zimbabwe Daily
ZIMBABWE – The Zimbabwe Junior Golf Association (ZJGA) has, in Nick Price’s words, “one of the finest development programmes in the world”. The impressive number of players coming through the ranks bears testimony to Zimbabwe’s greatest golfer’s words.
Previous PostThe Zimbabwe MDC wants to build – 2016 and beyond
Next PostWill Zimbabwe sport ever get state financial support?
ZIMBABWE - The Zimbabwe Junior Golf Association (ZJGA) has, in Nick Price’s words, “one of the finest development programmes in the world”. The impressive number of players coming through the ranks bears testimony to Zimbabwe’s greatest golfer’s ...